Archive du 20181114
Ravalomanana sy ny ekipany Tsy hanaiky lembenana
Rehefa nandeha ny fangatahana samihafa, dia namoaka ny voka-pifidianana isaky ny birao fandatsaham-bato ny CENI,
Dr Emile Ratefinanahary Tsy azo hihodivirana ny fihodinana faharoa
Nanao fanambarana sy fanehoan-kevitra momba ny toe-draharaham-pirenena, indrindra fa ny fifidianana filoham-pirenena ny Dr Emile Ratefinanahary, mpandrindra nasionalin’ny fikambanana OHT sady filoha nasionalin’ny antoko politika OHF.
“1er tour dia vita” Tsy azo eritreretina intsony
Mitarazoka hatrany ny famoahana voka-pifidianana eo anivon`ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana (CENI).
Loholona Amido « Fotoana tokony handravana ny CENI izao ! »
Efa tapitra iny ny fanangonana ny voka-pifidianana avy amin’ireo SRMV na ireo sampandraharaha misahana ny fikirakirana fifidianana 119 manerana ny nosy, hoy ny loholona voatendry tao amin’ny faritanin’Antsiranana, Amido.
Rivo Rakotovao Ombay mitady
Tototry ny fanakianana mivaivay ankehitriny ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana na ny CENI.
Manangasanga tokoa ny fandresena ho an`ny antoko Tiako I Madagasikara. Manentana ny rehetra ho tony ny depioten`ny boriborintany fahadimy, Rasendramiadana Clarisse, sady nisaotra tamin`ireo mponina ao amin`ny boriborintany iadidiany.
Marc Ramiaranjatovo “Mety hifandrirotra ny samy mpifaninana”
Amin`izao fotoana izao dia eo am-piandrasana ny valim-pifidianana izay natao tamin`ny alarobia 7 novambra lasa teo ny rehetra.
Raharaham-pirenena Manomboka ny don-tandroka
Ao anatin’ny vanim-potoana mafana ny tontolo politika noho ny voka-pifidianana no mandray fanapahan-kevitra izay tsy hitondra fitoniana ny fitondram-panjakana.
CENI Madagasikara Ahiana tsy hanao fihodinana faharoa
Na nanda ho tsy nandray volabe aza ny vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana na CENI dia sarotra ny hino fa tsy hisavovona ny dosie fitoriana ity rafitra ity hiakatra eny amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana mandra-pahatapitr’ireo 5 andro ahafahana mitory azy aorian’ny 20 novambra izao.
Fangaraharan’ny voka-pifidianana Tsy nifanaraka amin`ny toky nomena
Fifidianana mangarahara sy eken'ny rehetra no novoizina fa hotanterahina eto Madagasikara.
Fifidianana tao amin’ny boriborintany fahefatra Nisy ny tsy fandriampahalemana, hoy ny delege
Anisan’ny boriborintany iray teto Antananarivo naharenesana endrika tsy fahatomombanam-pifidianana be indrindra ny teo anivon’ny boriborintany fahefatra.
CENI Alarobia Nisintaka tsy hanara-maso ny voka-pifidianana intsony ny MAPAR
Namoaka fanambarana milaza ny tsy hiasany hanara-maso eny amin’ny CENI intsony ny solontenan’ny kandida Andry Rajoelina omaly.
Kandida nizara volabe Hitory izahay, hoy i Fanirisoa Ernaivo
Hametraka fitoriana manoloana ny lesoka hitany tamin’ny fifidianana ireo vondron’ny kandida maro tato anatin’ny fifidianana, izay efa nampaneno lakolosy im-betsaka noho ireo lesoka hitany sy ny karazana kajikajy maloto.
Volavolan-dalàn’ny tetibolam-panjakana 2019 Hampahafantarina ny antenimieram-pirenena anio
Nolanian’ireo solombavambahoaka nivory teny Tsimbazaza omaly 13 novambra 2018 tamin’ny 3ora folakandro, ny fandaharam-potoana vaovao iasana nanomboka ny alatsinainy 12 hatramin’ny talata 27 novambra 2018.
Mifamahofaho be ihany
Herinandro latsaka kely izay ny fifidianana Mbola mifamahofaho be ihany ireto anarana Mampametra-panontaniana be ihany ity CENI Lasa mahoraka be izao ilay resaka "anomalie"
Sambo goavana Europa 2 Nandalo tao Tolagnaro
Nigadona tao amin’ny seranan-tsambon’i Ehoala ao Tolagnaro omaly talata 13 novambra ny sambo goavana na “paquebot” Europa 2, mitondra mpizahatany maro be.
Sahotaka teny Analakely Baoritra roa, noheverina fa nisy baomba
Nikorontana ny teny Analakely manoloana ny tsangambaton-dRalaimongo sy ny manodidina omaly maraina tokony ho tamin’ny 8 ora.
Orinasa afaka haba may teny Tanjombato Mpiambina iray no maty, olona 2.000 no mety ho very asa
Lehilahy iray teratany vahiny, lehiben’ny mpiambina ao amin’ny orinasa afaka haba OCM nirehitra ny alatsinainy alina teo no fantatra fa namoy ny ainy noho ny hasemporana nahazo azy.
Kandida Fanirisoa Ernaivo Naka fialan-tsasatra manokana tamin’ny fampielezan-kevitra
Nahemotra anio alarobia ny fandraisan’ny filan-kevi-panjakana ny antontan-taratasin’ny kandida Faniry Ernaivo taorian’ilay raharaha nifanandrinany tamin’ny mpitandro ny filaminana tetsy Mahamasina niaraka tamin’ireo kandida 25 isa hafa namany.
Vato 667 kg sy voamboana 16 tsy ara-dalàna Saron’ny mpitandro ny filaminana
Vato nilanja 667 kilao indray no saron’ny zandary teo anivon’ny BPR Vakinankaratra ny alatsinainy 12 novambra lasa teo, tao amin’ny sakana mahazatra tao Anjazafotsy-Betafo.
Madagasikara Mba fantaro bebe kokoa
Hitondra hevitra vaovao ho anao, ho ahy ary ho antsika eo amin ny fampandrosoana anao, fampandrosoana ny ankohonanao ny fahafantarana an’izao zavatra voalaza manaraka eto izao.
Fikambanana HAFARI Malagasy Nahazo tany 100 ha vaovao indray …
Miroso hatrany ilay tetikasa fifindra-monina karakarain’ny fikambanana Hafari Malagasy eny Soaniedanana PK 67, lalam-pirenena fahefatra.
Ankatoky ny faran’ny taona Tsy maintsy hidina hatrany ny sandan’ny Ariary
Miankina amin’ny tolotra sy ny tinady eo amin’ny sehatra fividianana sy fivarotana vola vahiny (MID) ny fiakarana na fidinan’ny sandam-bola eto Madagasikara.
Taom-piotazana lodsia 2018 – 2019 Hisokatra ny 19 novambra, sambo roa ho avy ao Toamasina
Raha ny fanazavana nomen’ny talen’ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra eo anivon’ny faritra atsinanana, Atoa Rasolondraibe Ralph Antonio,
Fampandrosoana ara-toekarena Mifamatotra tanteraka amin’ny fampianarana
“Raha te hampandroso firenena anankiray dia tsy maintsy ny fampianarana no hampiroboroboana ary atao izay hahatongavan’ny maro hatrany amin’ny ambaratonga ambony mba hahamatihanina ny fahaiza-manaon’ny olona tsirairay amin’ny asa izay ataony”.